MSF Waxaa ay Cambaareynaysaa Weerarada lala beegsanayo Shaqaalaha gargaarka Waxaana ay ku baaqeysaa Sii deynta Shaqallaha kale ee la Afduubay, Hawsha Gargaarka Somalia waxaa Soo foodsaartay Khatar
MSF waxaa ay iminka baadi goob ugu jirtaa xal u helidda su’aasha adag ee ah sidii
ayadoo wax ku ool leh ay usii wadi laheyd hawlaheeda Somalia si loo gargaaro dadka
aad ugu baahida qaba daryeel ayadoo dhanka kalena la xaqiijinayo nabadgalyada iyo
badqabka dhamaan shaqaalaheena. Waxaan codsi u diraynaa dhamaan dadka, gaar ahaan maamulda ka taliya goobaha Somalia ka mid ah ee lagu hayo asxaabteena lasoo
afduubay,in ay wax walba oo karaankooda ah ay geystaan si loo fududeeyo sii deynta
Blanca Thiebaut iyo Montserrat Serra ayagoo badqaba.
“Si loo sii wado shaqadeeda gargaarka caafimaad ee bani’aadanimo si wax ku ool
ah,MSF waxaa ay ka dooneysaa dhamaan dhinacyada isku haya Somalia, Madaxada iyo
shacabka guud ahaan Somalia in ay garab naga siiyaan howshan iyo in ay gacan ka
geystaan xaqiijinta nabadgalyada iyo amniga shaqaalaha gargaar” Sidaas waxaa ku
baaqay Madaxweynaha calamiga ee hay’adda MSF , Dr Unni Karunakara .
“Saaxiibadeen Philippe iyo Kace, arrinkaa amniga iyo nabadgalyada ah si aafo leh ayay u hirgali weysay. Blanca iyo Mone dhankoodana, waxaa ay mas’uuliyad ka saarantahay madaxda iyo shacabka Soomaaliya fududeynta sidii si nabad ah loo dhameyn lahaa afduubidooda”.
Tel: (00 254) 725 041 860
Halkan waxaa ku lifaqaan cod kusabasan war saxafadeyd ay hay’adda MSF ku cambeyreynasa weerada lala beegsanayo Shaqallaha Gargaarka.